Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ nyere ndụmọdụ a ma kpọkwa oku a oge ọ gara ịgbape ụfọdụ ihe dị ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ rụrụ n'ime-ime obodo dị iche iche.
Ọrụ ndị ahụ a gbapere gụnyere: ebe nlekọta ahụ ike a rụrụ n'ụlọ mmụta 'Anambra State Polytechnic' dị na Mgbàkwụ n'okpuru ọchịchị Awka North, ụlọ ezumeezu a rụrụ n'Enugwu-Ukwu n'okpuru ọchịchị Njikọka, ụlọ nlekọta ahụ ike dị na Nrì n'okpuru ọchịchị Anaọcha, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ, ma bụrụkwa ndị a rụrụ n'okpuru amụma agba nke abụọ nke inye obodo ọbụla nde naịra iri abụọ ka ha wee họrọ ma rụọ ihe bụ mkpa ha.
N'okwu ya dịka ọ na-agbape, gọvanọ Obianọ nke onye nọchitere ya bụ onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'ihe gbasaara ọrụ ime-ime obodo, bụ maazị Okey Ezeobi kọwara ọrụ ahụ a na-arụ dịka nke dabàrà adaba n'usoro na ebumnobi nke ọchịchị ya n'ịhụ na e nwere mmepe zuru òkè n'ime-ime obodo dị na steeti ahụ.
O kwuru na ọ bụghị naanị na nke ahụ ga-enye aka ịkwàlite ọdịmma ụmụafọ steeti ahụ, kama na ọ ga-enyekwa aka iwèta mmekọrịta obodo na ibe ya.
N'okwu nke ya, nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ n'ihe gbasaara ịrụzùpụta ọrụ, bụ maazị Jeffery Ụbah kọwara ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ dịka nke na-agbasi mbọ ịkwalite ezi ọnọdụ obibi ndụ ụmụ mmadụ. O tinyekwara olu n'ịkpọkù ụmụafọ steeti ahụ ka ha na-echekwaba ihe dị iche iche gọọmenti rụnyere na mpaghara ha.
N'okwu ha n'otu n'otu, eze ọdịnala Enugwu-Ugwu, bụ Igwe Ralph Ekpeh; onyeisi ọchịchị obodo ahụ, bụ maazị Bonny Ọzọ Nkwuakụ; eze ọdịnala Mbaukwu, bụ Igwe Peter Anugwu na onyeisi ọchịchị obodo ahụ, bụ maazị Ọzọemena Ọnyiluka kelere gọvanọ Willie Obianọ maka ezi ọrụ o ji n'aka na steeti, ma kwe nkwa inye ya nkwàdo na ichekwaba ihe ndị ahụ a rụnyesiri ha na mpaghara ahụ.